बच्चाहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ घरेलु प्रयोगहरू - Ikkaro
बच्चाहरूको लागि प्रयोगहरू
गृह प्रयोगहरूमा यो अनिवार्य छ कि बच्चाहरूको लागि तथाकथित गृह प्रयोगहरूको लागि विशेष ठाउँ छ। तिनीहरू सरल प्रयोगहरू हुन् कि बच्चाहरू एक्लै वा वयस्कहरूको कम्पनिमा गर्न सक्छन् र सजिलैसँग पहुँचयोग्य र सस्तो सामग्रीको साथ "घरमा" डिजाइन गरिएको हुन्छ।
साधारण प्रयोगहरू र आविष्कारहरू, जसले सामान्यतया केही भौतिक सम्पत्तीलाई प्रतिक्रिया गर्दछ र जसले हामीलाई बच्चाहरू र जवान व्यक्तिहरूलाई मात्र अचम्मित पार्न अनुमति दिँदैन, तर यी प्रतिक्रियाहरूको पछाडि शारीरिक घटनाको व्याख्या गर्न पनि दिन्छ।
किन यो हुन्छ? र के हुन्छ यदि यसको सट्टामा म यो तरिकाले गर्दछु भने? वा यदि मैले सामग्री / उत्पादनहरू परिवर्तन गर्दछु?
यो सँधै चाखलाग्दो हुन्छ कि उनीहरू वयस्कहरू द्वारा सुपरिवेक्षण गरिएका हुन्छन् र उनीहरूको बच्चाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी मात्र गर्दैनन् तर उनलाई मार्गनिर्देशन गर्छन्। उसलाई सोच्न सहयोग गर्नुहोस्, आफैलाई सही प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। तपाईंलाई जानकारी फेला पार्न र तपाईंलाई उपलब्ध उपकरणहरू प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ।
र सम्भवत सबै भन्दा महत्वपूर्ण चीजहरू र हाम्रो वरपरको संसारको बारेमा तपाईंको जिज्ञासा जगाउन सक्षम हुन। रचनात्मकता, जिज्ञासा, सिक्ने र धेरै प्रयास।
मलाई यो प्रकारको प्रयोग सधै मनपर्‍यो तर मसँग बच्चाहरू धेरै छन् :)
कठिनाई जहिले पनि बच्चाको लागि सामग्री, प्रयोगहरू र होममेड आविष्कारहरू कसरी छुट्टाउने भन्ने बारे जान्नमा नै हो, र खेलौनाको सिर्जना?
ठिक छ, यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीले राम्रोसँग समाधान गर्ने आशा राख्छौं। मलाई लाग्छ कि हामीसँग एक राम्रो सामग्री वर्गीकरण छ।
मजा लिनुहोस् र सप्ताहन्तको फाइदा लिनुहोस् प्रयोगहरू गर्न जान हामी तपाईंलाई तपाईंको बच्चाहरूको साथ छोड्दछौं। र यदि तपाई शिक्षक हुनुहुन्छ भने, उनीहरूलाई कक्षा कोठामा लान नहिचकिचाउनुहोस्।
र जब तपाईं केहि गर्नुहुन्छ। कृपया टिप्पणी गर्नुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस् यो कसरी भयो।
कृत्रिम हिउँ कसरी बनाउने
म लामो प्रयास गर्न चाहन्थें कृत्रिम हिउँ बनाउन। यो एउटा शिल्प हो जसले क्रिष्टमसमा हाम्रो जन्म दृश्य सजाउन मद्दत गर्दछ वा यदि हामी बच्चाहरूसँग मोडल बनाउँछौं र हामी यसलाई हिउँसँग यथार्थवादको स्पर्श दिन चाहन्छौं। वा केवल उनीहरूको हात मैला र एक विस्फोट गर्न को लागी।
कृत्रिम हिउँ पाउन मैले different बिभिन्न विधिहरू प्रयास गरेको छु, म तिनीहरूलाई देखाउँछु र तिनीहरूलाई लेखमा तुलना गर्छु। इन्टरनेट भरिएको छ कसरी डायपरको साथ हिउँ बनाउनका लागि ट्यूटोरियलहरू र मलाई यो एक विपत्तिजनक गतिविधि भेटियो र बच्चाहरूको लागि उपयुक्त छैन।
पहिलो निराश प्रयास पछि, मलाई यो अनुभव यति थोरै मन पर्यो कि मैले घरमा बनाएको कृत्रिम हिउँ बनाउनको लागि अझ बढी विधि खोजेको छु, धेरै सुरक्षित र अधिक विस्मयिक तरिका जुन तपाईं आफ्ना बच्चाहरूसँग सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। तल तपाईंसँग यो सबै छ।
यदि तपाईं व्यावसायिक उत्पादनहरू कृत्रिम हिउँ, नक्कली हिउँ वा तत्काल हिउँ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी यी सिफारिस गर्दछौं।
हिउ पर्न देउ,
सेपकिना (चमकको साथ कृत्रिम हिउँ)
बवंडर कसरी बनाउने
यस लेखमा हामी घर मा एक मिनी तूफान प्रजनन को लागी धेरै तरिकाहरू छोड्दछौं। यो एक मा एक भँवर उत्पादन को हुन्छन् ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
अदृश्य मसी कसरी बनाउने
हामी दिन्छौं घरमा र सजिलैसँग अदृश्य मसी बनाउनको लागि तीन तरिकाहरू।
पहिलो र हुनसक्छ सबै भन्दा विस्तृत स्टील ऊन को छाउनी परिचय, जो हामी scaurers बाट हटाउने मा बनेको कागतीको रस र यसलाई and र १ days दिनको बीचमा आराम गर्न दिनुहोस्।
निम्बूको साथ अदृश्य मसी
दूधको साथ दृश्य घर प्रयोग
मैले आफूलाई भित्र पारेको छु मलाई हल्लाउनु यो संग रंगीन र साधारण घर प्रयोग, यससँग बनेको:
शेखी अण्डा - रसायन विज्ञान प्रयोग
चाखलाग्दो, यो प्रयोग कि तिनीहरूले हामीलाई मेरी छोरीको स्कूलमा पठाए। यो एक को बारे मा छ हाम्रा बच्चाहरूसँग गर्नको लागि सरल प्रयोगमलाई थाहा छ उनीहरूलाई कसरी परिचय गर्ने विज्ञानको अद्भुत संसार, यद्यपि यसको साथ सायद हामी तिनीहरूलाई कन्डिसन गर्दैछौं।
बन्डि B बोनहरू
El मानव यो यौगिकहरूको समूहबाट बनेको हुन्छ जसले यसको लागि खास र महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दछ, उदाहरणका लागि क्याल्सियमको संरचनात्मक कार्य हुन्छ (हड्डीको कठोरता)। डुबाउँदा अचारको हड्डी र यसलाई धेरै दिनसम्म छोड्नुहोस्, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यसले नरम कसरी हुन्छ र तपाईंको औंलाहरूसँग बा be्ग वा भाँच्न पनि सक्छ। यो किनभने त्यो छएसिटिक एसिड (सिरका) समाधान हड्डी बाट खनिज "चोरी" तिनीहरूसँग प्रतिक्रिया गरेर र उत्पादन गरेर, उदाहरणका लागि, क्याल्सियम एसीटेट। यस तरिकाले, क्याल्सियमको मात्रा घटाइन्छ, जसलेaosteoporosis चरम